August 2017 – siifsiin
Ayyoon beektuu dha Haati dooktoroota Kan piroofeseroota Kan Injineeroota Maal kana qofaree Kan paayeletoota Galaanni kee guddaa Hunduu sirraa madda Ati naaf jiraadhuu Horii buliin jedha Ayyoo guddistuu too Harmee harmaa dachaa Sittui naag qorichaa Naa tarkaanfachiftee Meeqatam riiqicha Tokkolee sin caaluu Eegaa rabbii tokkichaa Galaankee hedduu Umrii sif laatu Fayyaa waliin dachaa!
Uummati Oromoo jaarraa tokko dura sirna gadaatiin ofiin of bulchaa ture. Minilik Oromiyaa erga weeraree qabate (gabroomfate) booda garuu sirni gadaa hafee,waanjoo gabrummaa sirna nafxanyaa jalatti bitamaa ture. Egaa baroota sana keessatti uummati Oromoo aadaafi,dudhaasaa akka irraanfatu godhameera. Seenaansaas aguugameefi daguungorsamee barreeffamuudhaan eenyummaasaa akka irraanfatuuf cunquursaan guddaa irratti raawwatamaa ture. Amma garuu sabi guddaa kun … Continue reading Seenaa Oromoo Raayyaa
Akaakayyuushee kana arguu baattus, seenaasaa dhageesse irraa kan ka'e akka malee jaallatti. Akkaataa itti harmeeshee guddise, jaalala inni ishee argisiise, oolmaasaa baay'ee dhageesseetti. Fuulashee gudunfitee dhaabattee keenyan manaa ilaalti. Uffata hirribaa ittiin bulte hin jijjiirranne. Siree irra bulte hafaa jirti. Gidduutti akka itti dhufaa wayii yaadni itti dhufnaan akkuma uffata siree qabattee jirtutti dhaabattee keenyan … Continue reading Dhibbisaafi Kuullee
Hunduu haa Barannuu
Hunduu haa Barannuu Barumsi ba'eessa Doofummaa balleessaa Qarooma jabeessaa Dandeetti gabbisa Warri Baratanii rakkoollee qoratuu Warri hin baratiin Dukkaanaan Jiraatu Walaalli Badduudha nama gooti raatu Dhiiraaf dubaraan hunduu Haa baratuu horsiisaf Barumsa waal simsifnee Fayyaa fi qabeenya keenya Tiksinee Jiruu dhaaf Qophoofna dandeetti Gabbifna barumsi kan hunda Adda hin fo'atu Ijoolleef manguddoo jedhe Hin gaafatuu … Continue reading Hunduu haa Barannuu